Kuboshwe odlwengule inja | Scrolla Izindaba
Kuboshwe odlwengule inja
Indoda eneminyaka engama-34 ubudala ebanjwe kwividiyo idlwengula inja, iboshiwe.
Umnikazi wenja oneminyaka engama-26 waseHlohlolwane ngase-Clocolan e-Free State uthe, akasenandaba nokuthola enye inja.
Ukuboshwa kwale ndoda ngoLwesine kulandela ngemuva kokuthi abakwa-Scrolla.Africa batshengise i-Bloemfontein SPCA le vidiyo ngoLwesibili.
Umhloli wezilwane i-Bloemfontein SPCA uTebogo Maswanganye utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi, bangabaphathi bezomthetho futhi banamandla afana nawamaphoyisa.
“Singakwazi ukuhlanganisa futhi sivule idokodo lethu bese siliyiisa emaphoyiseni ukuze libhaliswe,” kusho uTebogo.
“Ngambopha umsolwa ngaphansi komthetho wokuvikela izilwane futhi ngaphinde ngambopha ngecala lobugebengu ngaphansi kwe-act 32 okuwukuvikela izingane ezineminyaka eyi-12 noma ngaphezulu kodwa ezingaphansi kweminyaka eyi-16 ekuhlukunyezweni ngokocansi ngabantu abadala.”
Uthe, kungekudala bazothola usuku lwase nkantolo.
Umnikazi wenja edlwenguliwe phambilini wayethe i-SPCA izomsiza ukuthi athole enye inja kodwa uMaswanganye uthe i-SPCA ayisizi abantu ukuthi bathole izilwane kodwa kukhona inqubo eqinile nezinyathelo ezilandelwayo ze-adoption.
Lona wesifazane utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Kodwa angicabangi ukuthi ngizophinde ngifune ukuba nenye inja futhi. Kungishaqisile okwenziwe umakhelwane wami kuBobbie wami.”
Okhulumela amaphoyisa uColonel Thandi Mbambo uthe, “umsolwa kungenzeka ukuthi uyagula ngokomqondo futhi inkantolo mhlawumbe izomdlulisela kwabahlola ingqondo. Uzovela ngaphambi kweNkantolo yeMantshi yase-Clocolan kungekudala.”
UMaswanganye uthe, kungenzeka ukuthi bamsizile umsolwa ngokumsusa emphakathini obuthukuthele.